Paper Photo Frame - Neoxian City
ဒီတစ်ခုကစက္ကူတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ photo frame တစ်ခုပါ။ပြုလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကိုပုံနဲ့စာဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။စက္ကူခေါက်တွေအများကြီးခေါက်ရမှာပါ။လိုအပ်တာတွေကကတ်ထူ၊ရောင်စုံစက္ကူ၊ကတ်ကြေး၊ကော်၊ခဲတံ၊ပေတံစသဖြင့်ပါ။ပထမအဆင့်မှာ frame အတွက်စက္ကူခေါက်ရမယ်။စာရွက်ကိုအလျားအနံ 5cm,10cm ယူပါတယ်။ပြီးနောက်ပုံအတိုင်းအဆင့်ဆင့်ခေါက်လိုက်ပါတယ်။ထိုစက္ကူခေါက်တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကော်ကပ်၍ဆက်ပြီး frame
အတွက်ကော်ကပ်ရန်အခြားစက္ကူခေါက်များခေါက်ရမှာပါ။စာရွက်ကိုအလျားအနံ 5cm,10cm ဖြတ်ပါတယ်။ပြီးနောက်ပုံပြထားတဲ့အဆင့်အတိုင်းအဆင့်ဆင့်ခေါက်ပါတယ်။ထိုစက္ကူခေါက်များကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကော်ကပ်ပါတယ်။ထိုကော်ကပ်ထားတဲ့စက္ကူခေါက်သုံးခုကိုကော်ကပ်ပြီး၊ frame နဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်အခြားကတ်ထူကိုအပြာရောင်စက္ကူနဲ့ကော်ကပ်တယ်။ပန်းပွင့်ကိုတော့စက္ကူအပိုင်းများဖြတ်၍အနားတစ်ဘက်မှာအပိုင်းငယ်များညှပ်၍ပန်းပွင့်ပုံစံခေါက်၍ကော်ကပ်ပါတယ်။ပြီးနောက်ပန်းပွင့်များဖြင့်အလှဆင်ပါတယ်။
hive-122133 myanmar diy ecency palnet creativecoin proofofbrain neoxian ash
htwegyi tipped asterkame (x1)
uthantzin tipped asterkame (x1)
@viviankay00(4/10) tipped @asterkame (x1)
Your content has been boosted with Ecency Points, by @asterkame.
ဒီ photo frame လေးကလည်း အတော်လှပါတယ်။ !PIZZA
ဟုတ်ကဲ့ thanks for pizza.
photo frame ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ချစ်စရာလေးရှင့်